The Huawei Mate 20 Pro na-enweta ọrụ DC Dimming | Gam akporosis
Huawei Mate 20 Pro na-enweta ọrụ DC Dimming site na mmelite ọhụrụ
Na-arịwanye elu, anyị na-ahụ na ndị na-emepụta ama na-arụ ọrụ OLED na ntanetị ha. Omume a na-enweta ike karịa oge, ebe ọ bụ na ha na-anọchi anya agba ndị doro anya na ndị ojii akọwapụtara karịa ogwe LCD. Ọzọkwa, ha na dakọtara na ihe mmetụta mkpịsị aka wuru n'ime onwe ha.
Nanso, wɔn a wɔasra wɔn no nkaefo a wɔasra wɔn no. Gịnịkwa ka ha bụ? Ọ dị mma, azịza ya dị mfe: mgbe oge ọrụ ihuenyo na-ebelata, ma ọ bụ site na ọkwa ngebichi nke ihuenyo ahụ, ngbanwe ọkụ na-enweghị ike ịghọta bụ nke na-eme ka ahụ ghara iru onye ọrụ ahụ ala. Iji dozie nsogbu a na otu n'ime ọkọlọtọ kachasị ike, Huawei, site na nwelite ọhụụ, nwere gbakwunyere ọrụ DC Dimming na Mate 20 Pro, ọnụ nke bịara na ... otu OLED panel, n'ezie.
DC Dimming bu ihe anyi makwara dika DC dimming. Site na njirimara a, ụlọ ọrụ China na-achọ iji belata isi ọwụwa na nju anya nke nchapu nke OLED panel nke Huawei Mate 20 Pro. Agbanyeghị, i kwesịghị iche na naanị ihuenyo nke ngwaọrụ a na-akpata ha; otu ihe a na - eme na teknụzụ OLED niile (na AMOLED, n’ezie) nke ọnụ ndị ọzọ.
Mmelite nke na-abịa na Nwunye 20 Pro na njirimara a na-enye EMUI ngwa ngwa firmware 9.1.0.135 ma ọ bụ naanị maka China. Mgbe ọ malitere ịmalite ụwa niile, ịnwere ike ịkwado ya na Nwunye 20 Pro gị site na ịga Nhazi> Ihuenyo> Anya nkasi obi> Kwado Mbelata nchapu.
Anyị na-enyocha Huawei Mate 20 Pro, igwefoto na nnwere onwe site na ọkọlọtọ
Cheta ịnwe ngwaọrụ nwere ezigbo batrị ma jikọọ na netwọk Wi-Fi siri ike ma dị elu tupu ịmalite usoro nbudata na ntinye nke sọftụwia ọhụrụ, iji zere ọdịda ọ bụla n'oge a na oriri nke ihe ngwugwu. data.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei Mate 20 Pro na-enweta ọrụ DC Dimming site na mmelite ọhụrụ
Onye SnapPra 7T ga-achịkwa OnePlus 855T